သင်၏ Self-Discovery ခရီးစဉ်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အတွက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > သင်၏ Self-Discovery ခရီးစဉ်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အတွက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေရာများ
တစ်ကိုယ်တော်ခရီးစဉ်စီစဉ်ခြင်း ပင်ရာသီအလိုက်ခရီးသွားများအတွက် hectic စေနိုင်သည်, အထူးသဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်မှန်ကန်သောနေရာကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်ထိုတွင်ရှိနေစဉ်ပါ ၀ င်ရန်သင့်တော်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်သည်. ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်လို့ပါ.
လမ်းပေါ်မှာတစ်ယောက်တည်းနေခြင်းဟာသင်လိုချင်တဲ့အချိန်မရွေးသင်သွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်, တစ်စုံတစ် ဦး ကအခြားသူရဲ့အချိန်ဇယားကိုကိုက်ညီရန်မလိုဘဲ. လည်း, သင်ဟာသူစိမ်းတွေအကြားမှာဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးစိန်ခေါ်နိုင်ပါတယ်, သောသင်တို့၏ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်, နှင့်သင်တန်း, Self- ကြီးထွား.
ကပြောသည်တော်မူပြီးမှ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုခရီးစဉ်အတွက်သင့်မှာစိတ်နေစိတ်ထားတစ်ခုရှိပါသလား? ဤဆောင်းပါးကမီးမောင်းထိုးပြထားသည်7တစ်ကိုယ်တော်လည်ပတ်ရန်အပျော်ရွှင်ဆုံးနေရာများ.
1. သင်၏ Self-Discovery ခရီးစဉ်သို့သွားရောက်ရန်နေရာများ: သြစတြေးလျ
စတြေးလျသည်ရေငုပ်သမားအများစုအတွက်အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည် အဆုံးမဲ့ရေငုပ်အခွင့်အလမ်းများ အပျော်တမ်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိရေငုပ်သမားများအတွက်နှစ် ဦး စလုံး. သငျသညျငုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြသည်မဟုတ်ရင်တောင်, တိုင်းပြည်မှကမ်းလှမ်းထားသည့်ဝှက်ထားသောဘဏ္treာများစွာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင်အချိန်ကောင်းရပါလိမ့်မည်. သြစတြေးလျသည်မျိုးသုဉ်းမှုအရှိဆုံးသို့မဟုတ်နေထိုင်ရန်နေရာလည်းဖြစ်သည် မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိတိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်, ဒါကြောင့်သင်ဟာအနီးအနားမှာရှိတဲ့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဖို့အခွင့်အရေးရှားပါလိမ့်မယ်.
သို့သော်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များသည်အဓိကကျသည်မဟုတ်သားကိုဘာကြောင့်သြစတြေးလျကိုတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားများအတွက်ထိပ်တန်း ဦး တည်ရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သလဲ. အဓိကအကြောင်းပြချက်များမှာတိုင်းပြည်၏ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်သည်, စိတ်ချရသော အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, နှင့်စျေးပေါနေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်စရာ. သင်သည်သြစတြေးလျား၌အလွန်လုံခြုံလိမ့်မည်.
ဒီမှာယဉ်ကျေးမှုကြွယ်ဝသည်နှင့်အစားအစာအရသာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင့်မှာစားစရာတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။. တည်းခိုရန်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ဤနေရာတွင်အလွန်တတ်နိုင်သည်, ဘယ်လောက်လက်လှမ်းဖော်ပြရန်မ ဘန်ကောက် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှဖြစ်သည်. ပြီးတော့မင်းရဲ့စိတ်ကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေမယ်ဆိုရင်, မင်းကဘုရားကျောင်းတစ်ခု၊ တရားအားထုတ်ရန်နေရာမှာအမြဲဝင်ထိုင်ပြီးတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်တယ်.
3. သင်၏ Self-Discovery ခရီးစဉ်သို့သွားရောက်ရန်နေရာများ: အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲကိုပြန်, လန်ဒန်တစ်ကိုယ်တော်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးမကြာခဏမြို့ဖြစ်ခဲ့သည်. တစ်ခုတည်းသောအချက်ကသင့်တွင်ကုမ္ပဏီမရှိပါက၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင့်အားပြောသင့်သည်. ဘာကင်ဟမ်နန်းတော် လက်ရှိတွင်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအများဆုံးဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်လန်ဒန်မှာတစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ. သငျသညျကန့်သတ်အချိန်အတွင်းအများဆုံးဆွဲဆောင်မှုကြည့်ချင်လျှင်, ရုံလန်ဒန်သို့ဝင်ရောက် အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီး သငျသညျနောက်တစ်နေ့မွို့သို့သွားရောက်သည့်အခါ.
သင်တစ် ဦး တည်းကားမောင်းတာကိုအကွာအဝေးများစွာအတွက်နှစ်သက်ပါသလား? အတော်များများကတစ် ဦး တည်းသောခရီးသွားများအတွက်များအတွက်နယူးဇီလန်ကိုချစ် ကားမောင်းရွေးစရာများ သူတို့နှင့်ညီသည်. သင်လိုအပ်သမျှကား camer တစ်ယောက်သို့မဟုတ်သာမန်ကားတစ်စီးကိုငှား။ လမ်းများသို့ရောက်သောလမ်းကိုသွားရန်ဖြစ်သည်. ဒါကဖြစ်ပါသည် လှပသောတိုင်းပြည် လေ့လာစူးစမ်းဖို့. သင်အကူအညီလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းဒေသခံများကအလွန်ကြိုဆိုခြင်းနှင့်ကူညီခြင်းများဖြစ်သည်.
5. သင်၏ Self-Discovery ခရီးစဉ်သို့သွားရောက်ရန်နေရာများ: ပီရူး
သင့်လည်ပတ်မှုအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အထူးနေရာအသစ်တိုင်းနီးပါး, ဒါပေမယ့်ပီရူးနိုင်ငံကရိုးရှင်းစွာရပ်တည်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုပါ. ဤနေရာသည်လူအများစု၏သဘာဝအလှအပများနှင့်ဘဏ္treာများကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်, လူတွေဟာအဲဒါကိုလုံလောက်စွာရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး. င်း ကြွယ်ဝသောသမိုင်း, တောင်များ, နှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု, အရာတိုင်း visit ည့်သည်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ရှိပါတယ်. ထို့ကြောင့်, အားလုံး၎င်း၏အမျိုးသားရေးဘဏ္treာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်, ပီရူးခရီးစဉ်ကိုသွားပါ, နှင့်တိုင်းပြည်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရ.
ယူအက်စ်ကွဲပြားခြားနားသည်, ဒါကြောင့်ဘယ်ကနေလာပါစေဘယ်နေရာကနေဘယ်တော့မှမခံစားရတော့ပါဘူး. မြန်မာနိုင်ငံသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးတောင်တန်းများဖြစ်ရန်သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်, ပန်းခြံများ, တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ, သို့မဟုတ်ကမ်းခြေ. ကမ်းခြေစကားပြော, နောက်ဖလော်ရီဒါသို့သင်အမေရိကန်၌ရောက်ပြီးသဲသောင်ပြင်၌ရေကူးရမည်. ထို့အပွငျ, ဒစ္စနေး သင်၏ကလေးဘဝကိုပြန်လည်အမှတ်ရရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်မှုခရီးအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်နိုင်သည်, နှင့်ခါးသောချိုသောလွမ်းဆွတ်မှုအနည်းငယ်ဘယ်သူ့ကိုမှထိခိုက်ဘူး. ပြီးတော့မင်းလိုအပ်တာကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်ပါ, သင်အမြဲနေနိုင်သည် အားလပ်ရက်အငှား ဝေးလူအစုအဝေးကနေ.
7. သင်၏ Self-Discovery ခရီးစဉ်သို့သွားရောက်ရန်နေရာများ: ဂျပန်
ဂျပန်နိုင်ငံသည်အခြားနိုင်ငံများထက်နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ မိုင်ပေါင်းများစွာရှေ့တွင်ရှိသည်. သငျသညျနည်းပညာအနာဂတ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှန်လျှင်, ဤမြို့ရှိစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေခြင်းသည်သင့်ကိုအမှန်ပင်ရွှင်လန်းစေသည်. တိုင်းပြည်သည်လှပသောဘုရားကျောင်းများတည်ရှိသည်, အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်များ, နှင့်စားသောက်ဆိုင်များ, အဖြစ်အာရှ၏အကောင်းဆုံးဝှက်ထားသောသဘာဝဘဏ္treာ. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ဤနေရာတွင်ထိရောက်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်သည်သင်၏တစ်ကိုယ်တော်ခရီးကိုပျော်ရွှင်စရာနှင့်လွတ်ကင်းစေလိမ့်မည်. သင်ကဂီတကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်, မင်းရဲ့လက်ပ်တော့ပ်နဲ့ခင်ဗျားကိုခေါ်လာလို့ရတယ် ဂီတ - ဆော့ဖ်ဝဲ သင်၏လှုံ့ဆော်မှုသည်သင့်ကိုထိမိစေပြီးသင်၏အထီးကျန်ဆန်သောခရီးစဉ်များကိုအထင်အရှားဖော်ပြရန်ချစ်စရာကောင်းသောအသံအချို့ထုတ်ပေးနိုင်သည်.
မြူးနစ်သည် Salzburg သို့ရထားနှင့်အတူ
ရထားနှင့်အတူ Salzburg မှဗီယင်နာ
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Salzburg မှ Graz
မလေးရှားတွင်လုပ်ရန်နှင့်သင်ယူရန်အရာများစွာရှိသည်, ဒါပေမယ့်ဒီအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံရဲ့စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့လူ ဦး ရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်ကြတာပါပဲ. ဆိုလိုတာကဒီမှာတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားတဲ့အခါသင်လမ်းလွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး. နိုင်ငံကကမ်းခြေတွေရှိတယ်, တောင်များ, ရေငုပ်အစက်အပြောက်, ပြီးတော့မင်းဘဝကိုအနားယူပြီးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ဖို့လိုတာမှန်သမျှ.
ခရီးသွားရာတွင်အဆင်ပြေလွယ်ကူမှုကြောင့်ခရီးသွားခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားခြင်းတို့သည်တစ်နေ့တာတွင်ရေပန်းစားလာသည်. မင်းမှန်တယ်. သင့်ရဲ့နေရာထိုင်ခင်းအတွက်လုံလောက်တဲ့ဘတ်ဂျက်ရှိဖို့သတိရပါ, အစာ, သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းခရီးကိုနှစ်သက်လိုပါကမိမိကိုယ်ကိုအားကိုးရသည့်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်သည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏ပျော်စရာနေရာများအားသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုခရီးစဉ်ကိုရထားဖြင့်အလည်အပတ်သွားရန်စီစဉ်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်“ သင်၏ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းခရီးစဉ်သို့လည်ပတ်ရန်အတွက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေရာများ” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Ffun-places-visit-self-discovery-trip%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
မင်းသမီး Emma သံမဏိ
Emma သည်နိုင်ငံအသီးသီးမှကုမ္ပဏီများနှင့်အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်လုပ်ကိုင်သည်. သူမ၏အလုပ်သည်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရန်မကြာခဏခရီးသွားလာရန်လိုအပ်သည်, ခရီးသွားခြင်းသည်သူမ၏ဝါသနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူမ၏အလုပ်သည်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်. သူမသည်အခါအားလျော်စွာအများအားဖြင့်ခရီးသွားနှင့်ပတ်သက်သောဆောင်းပါးများရေးသားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းကျန်းမာရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ရေဗက္ကာကိုဆက်သွယ်ပါ